ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: April 2013
မောင်... ထားခဲ့တဲ့ နေရာ (၁)
မောင် ကျွန်မတို့ဝေးခဲ့ကြတာ ကြာပြီနော်။ ၁၀ စုနှစ်တော်တော်များများ ကြာခဲ့ပြီ။ မောင်ကတော့ ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ ခုချိန်ထိ ကျွန်မတို့ထိုင်နေကြ ကော်ဖီဆိုင်လေးကို အချိန်မှန်လာတုန်း။ ဒါပေမယ့်ပေါ့ မောင် ရယ် ဝေးနေမှ တစ်သသ ဖြစ်နေတာထက် နီးနေတုန်းက ဘာလို့များ အချစ်ဆိုတာကို တန်ဖိုးမထားခဲ့ရတာလဲ။ ဘာလို့များ မိဘတွေကို မလွန်ဆန်ရဲလို့ပါ ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ ချန်ထားရက် ခဲ့တာလဲ။ မောင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က မလိုချင်ဘူးဆိုမှတော့ ကျွန်မ အတင်းတောင်းဆိုမနေတော့ပါဘူး မောင်နဲ့ အဝေးဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်မနေခဲ့တယ်။ ကျွန်မမောင့်ကို ချစ်နေစဲပါ ချစ်နေပါသေးတယ် ဒါပေမယ့် မောင့်ရဲ့ နှလုံးသားတည့်တည့်ကို ထိုးနိုင်မယ့် ဓါးတစ်ချောင်းကိုလည်း ချွန်မျှနေအောင် သွေးထားတယ်မောင်. အဟင်း ပြောရရင်တော့ နိုင်လိုမင်းထက်ပြုမူတတ်ကြတဲ့ မောင် တို့ တစ်မိသားစုလုံးကိုပေါ့။
ကျွန်မက အရင်ကလို မောင့်ရဲ့ ယုန်လေးတစ်ကောင် မဟုတ်တော့သလို မောင့်ရဲ့ နားလည်မှုလေးလဲ မဟုတ်တော့ဘူး။ ခု…ကျွန်မသွေးထားတဲ့ ဓါးလေးကို ထုတ်သုံးဖို့ အချိန်တန်ပြီလေ။ ဒါကြောင့် မောင်အချိန်မှန် လာထိုင်တတ်တဲ့ ဟောဒီကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ ထိုင်ပြီး မောင့်ကိုစောင့်နေတာ။ မောင်ကတော့ ကျွန်မကို မတွေ့သေးပါဘူး။ အသက် ၄၀ ကျော်ဆိုတဲ့ ကျွန်မ အရင်ကလောက် နုပျိုလတ်ဆတ်မနေပေမယ့် ရင့်ကျက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အလှမျိုးတော့ ကျွန်မမှာ ရှိနေသေးတယ်လို့ ထင်တာပဲ။ ဟော..ကျွန်မရဲ့ ဓါးကလေး ဆိုင်ထဲ ၀င်လာပြီပဲ။
သားက ခပ်သွက်သွက် လျှောက်လာရင်း ..ဆိုင်ထဲကို မျက်လုံးဝေ့ ကြည့်ပြီး တစ်ခုခုကို ရှာနေတာ။ ကျွန်မသိတာပေါ့။ ဒီနေ့ သားရဲ့ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်တဲ့ အထိန်းအမှတ်နဲ့ သားရဲ့ဖေဖေနဲ့ တွေ့ပေးမယ်လို့ သားကိုပြောထားတာကိုး။
“ထိုင်ပါအုန်း သားရယ်။ တစ်ကယ်ထဲလောနေလိုက်တာ။ သား ဖေဖေ ကိုတွေ့ရင် ဟောဒီက ၁၈ နှစ်လုံးလုံးပြုစု စောင့်ရှောက်လာတဲ့ မေမေ့ကိုတောင် မေ့ သွားမလား မသိပါဘူး။”
“ဟာ မေမေက လည်း .သားက ဖေဖေ့ကို မြင်ဘူးချင်ရုံသက်သက်ပါ။ သားအချစ်ဆုံးက ဟောဒီက သားရဲ့ ချစ်လှစွာသော မေမေ ဒေါ်မြတ်သက်ထား တစ်ယောက်တည်း။”
“အမယ်လေး ချွဲနေလိုက်တာ။ ဒါကြောင့် မေမေ့ရဲ့ အသည်းစွဲလေးဖြစ်နေတာ။ ဟိုမှာတွေ့လား ဟိုဘက်ထောင့်မှာ ထိုင်နေတာ။ အဲဒါ သားရဲ့ ဖေဖေ အရင်းပဲ ။ နာမည်က ဦးခိုင်ခန့် တဲ့။ ကဲ သား. စကားပြောချင် သွားပြောလေ မေမေ ဒီမှာ ထိုင်စောင့်နေမယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ မေမေ ဒီနေ့ ဆိုင်ကို မေရီ နဲ့ လွဲခဲ့ပြီ။ ဒီမှာ စာအုပ်ထိုင်ဖတ်ရင်း စောင့်နေမယ်လေ။ ”
သားကို ခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်ရင်း အကွယ်ကနေ သူနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် မြင်ရတဲ့ ဘက်ကို ရွှေ့ပြီးထိုင်လိုက်တယ် မောင့်ရဲ့ တည်ငြိမ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ ဘယ်လို လှုပ်ရှားသွားမလဲ ဆိုတာကို သိချင်လို့။ သားရေ မေမေ သွေးပေးထားသလောက်သာ ထက်လိုက်စမ်းပါ။
“ဦး ကျွန်တော် ဒီမှာ ခဏလောက်ထိုင်မယ်နော်.”
ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး မွန်ရည်တဲ့ ကောင်လေးကြောင့်ပဲ သူအလွယ်တစ်ကူ ခေါင်းညိမ့် လိုက်တယ်။
“ထိုင်လေကွာ. ဦးလဲ တစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့ ပျင်းနေတာနဲ့ အတော်ပဲ။ ခုလိုမျုိး အပြင်မှာ မိုးတစ်စိမ့်စိမ့် ရွာနေတာကို ကြည့်ပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို အရသာခံသောက်ရတာ တော်တော်အရသာရှိတာ”
သူပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် လူငယ်လေးက တဟင်း ဟင်းရယ်လိုက်တော့ သူတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာတော့ အမှန်
“မင်းက ဘာလို့ ရီရတာလဲ ကွ”
“အော် ..ဒီလိုပါဦး ကျွန်တော့်ရဲ့ မေမေ နဲ့တူလို့ပါ။ မေမေကလဲ ဦးလိုမျိုးပဲလေ မိုးလေးစိမ့်စိမ့်လေး ရွာနေတာကို ကြည့်ပြီး ကော်ဖီထိုင်သောက်တတ်လို့ ။”
“သြော်.. ဒါနဲ့ မင်း ဒီထိုင်ခုံမှာ လာထိုင်ပြီး ဦးကို နှုတ်ဆတ်ရချင်း အကြောင်းအရင်းက …”
“အဲဒါက..ဒီလို ဦလေးရ ဒီနေ့ ကျွန်တော့် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်တယ်လေ။ ကျွန်တော့် မေမေက ငယ်ငယ်လေးထဲက ကျွန်တော် ဖေဖေနဲ့ တွေ့ချင်တယ်လို့ ပြောရင် မင်း အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်တဲ့ နေ့ကျရင် မေမေ ပေးမယ့် မွေးနေ့လက်ဆောင်တဲ့။ ”
“အင်း..အဲဒီတော့ မင်းရဲ့ အဖေ နဲ့ တွေ့ပြီပြီးလား”
“ဟင့်အင်း ခုဦးလေးနဲ့ ပထမဆုံးလာတွေ့တာပဲ။ ”
ဟင်..ဒါဆိုရင် သူက ကောင်လေးရဲ့ အဖေ.အာ ဘယ်လိုလုပ်….
သူ့ရဲ့ ရှုးရှုးရှားရှား ဖြစ်သွားတဲ့ ပုံကိုကြည့်ပြီး ကောင်လေးက
“ခဏလေးပါ ဦး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မေမေ့ နာမည်ကိုလည်း နားထောင်ကြည့်ပါအုန်း။ ကျွန်တော့်မေမေရဲ့ နာမည်က ဒေါ်မြတ်သက်ထား တဲ့”
“ဘာ… မြတ်သက်ထား။ ”
ခုနက အပြင်မှာ မိုးစိမ့်ပြီးရွာနေတာ။ ခုသူ့ရင်ထဲမှာ မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်သလိုပဲ။ ရင်ထဲမှာ ဒိန်းကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။
“ဟုတ်တယ် ဦးလေးရဲ့ တိုးတိုးပြောပါ။ဆိုင်ထဲမှာ လူတွေအများကြီးပဲ ၀ိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ ဟိုမှာလေ ကျွန်တော့်မေမေလဲ ပါတယ်။”
ကောင်လေးညွန်ပြတဲ့ ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ သူမကလည်းသူ့ကို ပြန်ကြည့်ပြီး ခေါင်းညိမ့် ပြုံးပြနေတာတွေ့တယ်။ဟုတ်တယ် မြတ်သက်ထားမှ မြတ်သက်ထားအစစ်။ သူ့ခြေလှမ်းတွေကို သက်ထားဆီကို အပြေးတစ်ပိုင်း သွားဖို့ ပြင်လိုက်တယ်။
“ဟိုးဟိုး ဦးလေး မေမေက ဦးနဲ့ စကားမပြောချင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဦးလာရင် သူထပြန်သွားမှာတဲ့။ ကျွန်တော် လည်း သွားတော့မယ်နော်။”
အဖြစ်အပျက်တွေက ရုတ်တရက် မြန်ဆန်လွန်းနေတာကြောင့် သူ့ရဲ့စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလွန်းနေတယ်။ သူကောင်လေးကို မတားလိုက်နိုင်ခင်မှာပဲ ကောင်လေးသူ့အနားက ပြေးထွက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ သက်ထား နဲ့တူတူ ဆိုင်ထဲက ထွက်သွားကြတယ်။ သူကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး သတိထားမိလို့ ဆိုင်ရှေ့ ကို ပြေးလိုက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ သူမ တို့သားအမိက ကားမောင်းပြီး ထွက်သွားကြပြီ။ ကောင်လေးကတော့ ကားပေါ်ကနေ တက်တာပြသွားသေးတယ်။
ဆိုင်ရှေ့မှာပဲ ရုတ်တရက် ဒူးတွေ ညွတ်ကျသွားတယ်။ သူ့ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူမထိန်းနိုင်ဘူး။ သူ့ရဲ့ သားတဲ့… နာမည် ဘယ်သူလဲလို့တောင် မသိလိုက်ပါလား သားရယ်..
စာတွေဖတ်ရတာများနေမှာစိုးလို့ အပိုင်း ခွဲပြီး တင်လိုက်ပြီ။
ချစ်စွာသော ဘလော့ မောင်နှမများ အားလုံး ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။
ခင်ပိတောက်တို့ မြူးတဲ့ ချိန်.။ ။
တိုင်းတပါး ခရီးသွား ..
ညီတို့ ညီမတို့ တာဝန်ကွယ်။ ။
FB(facebook) မှာ ပုံတွေ တင်ကြတာမို့
ထိန်းသိမ်းပါစို့ တို့မြန်မာ့ အတာ။
ဒီနှစ်သင်္ကြန် ရန်ကုန်ပြန်မယ်လို့ စီစဉ်ထားတာ။ ခုတော့ ပြန်ဖြစ်တော့ ဘူး။
မြန်မာနှစ်ကူးမှာ ဘလော့ မောင်နှမများ အားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။
ဘလော့မှာ သုံးထားတဲ့ ပုံလေးက အင်တာနက်ကပဲ ရှာဖွေပြီး တင်ထားတာပါ။ မူရင်းပိုင်ရှင်ကို ဒီနေရာ
လေးကပဲ ခွင့်တောင်းပါရစေ. ပိတောက်ပုံလေး ယူသုံးခွင့်ပြုပါလို့။
နောက်တစ်နေ့ မနက်အိပ်ရာနိုးတော့ ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး ညောင်းကိုက်နေတာပဲ။ ဖျားနေပြီ ထင်တယ်။
“ဟလို မီ လား။ အင်း ဟုတ်တယ် လှိုင်း ပါ။ ဒီနေ့ ဖျားနေလို့ ။ အင်း အင်း ဟုတ်တယ် အဲဒီ file တွေက သူ့ စားပွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်။ ခွင့် ၂ ရက်လောက်တော့ တင်ပေးထားနော်။ အင်း အင်း ..ကြားထဲမှာ ကိစ္စရှိရင် ဖုန်းပဲ ဆက်လိုက်တော့ နော်. ကျေးဇူး မီ ဒါပဲနော်..ဖုန်းချလိုက်တော့မယ် ..”
ရုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီးတာနဲ့ ဆေးခန်းကို အရင်သွားလိုက်တယ်။ ဆေးခန်းရောက်တော့ လူတွေများနေတာမို့ စောင့်ရအုန်းမည်။ မနက်စာလဲ မစားရသေး။ ဗိုက်ဆာလှပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ ဆေးခန်းရှေ့က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ မုန့်နှင့်ကော်ဖီ မှာသောက်နေလိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ တစ်ကိုယ်တည်း အထီးကျန်သလိုနှင့် အားငယ်နေသလိုပဲ။ သြော် ဖျားနေလို့နေမှာပါလို့ ဖြည့်တွေးလိုက်မိသည်။ ဒါပေမယ့် လှိုက်ကနဲတက်လာတဲ့ ၀မ်းနည်းစိတ်ကြောင့် မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်တို့သီလာပြန်သည်။ မသိမသာ လေး မျက်ရည်သုတ်လိုက်ရင်း ရင်ထဲမှာ ကြိတ်ရှိုက်နေမိသည်။ သြော် ငါ့နှယ် အရင်ကလဲ ဖျားဘူးတာပဲဟာ ဒီလိုခံစားချက်မျိုး မဖြစ်ဖူးပါဘူး။ ခုကျမှပဲ …..
ရှင်ဘာလာလုပ်ပြန်ပြီလဲ ဒီရေ ရယ် ။ ကျွန်မကို ဒီလောက်နှိပ်စက်ရ တော်ရောပေါ့။ ပြီးတော့ ရှင့်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ရင်မဆိုင်ချင်ဘူး။ ရှင့်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရ ခက်ခဲတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ရင်မဆိုင်ချင်ဘူး ဆိုရင် ပိုမှန်မယ် ထင်တယ်။
“လှိုင်း ရယ် ဖျားနေတယ် ဆိုပြီးတော့. ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းလာ ရလား။ တော်သေးတာပေါ့ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး လှိုင်း ဖေဖေ ကိုမေးပြီး လိုက်လာလို့။ ခုဘာတွေစားနေတာလဲ။ အာ..ဖျားနေတဲ့ဟာကို ဒီကော်ဖီနဲ့ မုန့်နဲ့ က ဘယ်လိုလုပ် အာဟာရ ဖြစ်မှာလဲ။ လှိုင်း ကြိုက်တဲ့ ဘဲသားဆန်ပြုတ် လေ ဒီနားမှာ ဆိုင်ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ဟေ့ ကောင်လေး ရေ ဒီမှာ ပိုက်ဆံထားခဲ့ ပြီ။ ဆေးခန်းကို ကိုယ်မေးခဲ့ပြီ နောက် ထပ် ၁၅ မိနစ်လောက် စောင့်ရအုန်းမယ် ပြောတယ်.”
စကားတွေလဲ အဆက်မပြတ်ပြော ပြီးတော့ ကျွန်မကိုပါ အတင်းဆွဲထူမလိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကြောင့် ဘာမှ မေးမနေတော့ဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်မသူ့ကို ချစ်ရတာ နာကြင်ခံစားနေရတယ် ဆိုပေမယ့် ခုလို သူဂရုတစ်စိုက်ရှိနေတာကိုးပဲ ကြည်နူးမိပြန်တယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာလဲ ခုနကလိုမျိုး အားငယ်တယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုး မရှိတော့ ပြန်ဘူး။ သြော် ဒီရေ ရယ် ရှင့်ကိုချစ်ရတာ ပင်ပန်းလိုက်တာ။
အဲဒီနေ့ က .သူကျွန်မရဲ့ ဘေးမှာ တစ်နေကုန် နေပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ဂရုစိုက်မှု ကြင်နာသနားတဲ့ အကြည့်တွေကိုတော့ မနက်ဖြန်မှာ ထပ်ရလိမ့်အုန်းမယ်လို့ ကျွန်မ မမျှော်လင့်ရဲတော့ ပါဘူး။ အဖြေထွက်ပြီးသား ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို အဖြေအတွက် ထပ်စဉ်းစားဖို့ မလိုတော့ ပါဘူး။
“လှိုင်းမှာ အလုပ်ထွက်ရလောက်အောင် ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းပြချက်များ ရှိလို့လား”
“ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်။ ဖေဖေ ပိုင်တဲ့ ပုဂံမှာ ရှိတဲ့ ဟိုတယ်ကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်ပေးဖို့ပါ။ ဖေဖေက ကျန်းမာရေးကြောင့် နားချင်ပြီတဲ့လေ။ ဒါကြောင့်ပါ။”
မျက်နှာကို အချိုဆုံးဖြစ်အောင် ပြုံးထားရင် အကြောင်းပြချက်တွေပေးခဲ့တယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကျွန်မအလုပ်ထွက်ချင်ရတဲ့ ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ ရှင့်ရဲ့ဘေးနားမှာ ရှိမနေချင်လို့ ပါ ဒီရေ။ နောက် ၃ လလောက်အကြာမှာ ကျွန်မ company ကနေ အလုပ်နားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ပုဂံမှာ ရှိတဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့ ဟိုတယ် ကိစ္စတွေ ကိုစီမံရင်း လေ့လာရင်း လှိုင်းရဲ့ ဘ၀ထဲက ဒီရေ့ ကို မေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ သူကျွန်မကို လိမ်ညာခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကိုတော့ ရှာမနေချင်တော့ပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မသူ့ကို ချစ်ခဲ့ဘူးတယ် ချစ်နေရတယ် ဆိုရင် ကျွန်မဘ၀ အတွက်လုံလောက်ပါပြီ။ ဒီထက်ပိုပြီး အချစ်အတွက် ဘာကိုမှထပ်ပြီး လောဘကြီးမနေတော့ ဘူး။ ရာသီတွေ အချိန်စက်ဝန်းတွေကို အလုပ်ထဲစိတ်ကို နှစ်ပြီး လှလှပပ ကြီး ဖြတ်ကျော်ပစ်လိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့် လောကကြီးက ကျွန်မနေသားကျနေတာကို မနာလိုဘူးနဲ့တူတယ်။ တည်ငြိမ်တဲ့ ဘ၀လေးကို လှုပ်နိုးလိုက်ပြန်ပြီ။ ကျွန်မနဲ့ ဒီရေ တို့ ပြန်ဆုံခဲ့ကြတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ သူ့ကိုကြည့်ရတာ တစ်ခုခုကို စိတ်ရှုပ်နေသလိုပဲ။ သူက ကျွန်မတို့ဟိုတယ်မှာ လာတည်းတဲ့ ဧည့်သည်ပေ့ါ။ ဒီရေ ကတော့ ကျွန်မကို မမြင်ပါဘူး။ ကျွန်မကတော့ သူ့ရဲ့ သက်ပြင်းတွေ ခဏခဏ ရှိုက်နေတဲ့ ကျောပြင်ကိုကြည့်ရင်း အလွမ်းဖြေနေတဲ့ သူဆိုပါတော့။ ရှင်ဘာတွေများ သောကများနေတာလဲ ဒီရေ ရယ်။ နေ့တိုင်းလိုလို ဟိုတယ်က အရက်ဘားမှာ ရှင့်ကိုတွေ့နေရတာ စိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ။ ကျွန်မ ရှင်နဲ့ တွေ့လိုက်ရင် ကောင်းမလား။ ရှင့်ရဲ့ သောကတွေကို ကူညီပြီးဖြေရှင်းပေးလို့ ရနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။
“ဒီရေ တို့ လက်ထပ်ပြီးကြပြီလား”
“ဟင့်အင်း. ကိုယ့်ရဲ့ စေ့စပ်ပွဲကို ကိုယ့်ဘက်က ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။”
“လှိုင်း ကို ချစ်ခဲ့မိတဲ့ အချစ်တွေက ကိုယ့်ကိုယ်နိုင်သွားလို့”
“ဟုတ်တယ်. ကိုယ့်ဘ၀မှာ လှိုင်း ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ မိန်းမနှစ်ယောက်ကို ပတ်သတ်ခဲ့ ဘူးတယ်။ တစ်ယောက်က ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ လှိုင်း။ နောက်တစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့ မိထွေး လှိုင်းရဲ့ အမေအရင်း ဒေါ်ခင်မေလှိုင်း”
“မ..မ ဖြစ်နိုင်တာ။ မေမေ က လှိုင်း ကိုမွေးပြီးပြီ ချင်း ဆုံးသွားပြီ။ဘယ်လိုလုပ်..”
“ဟုတ်တယ်။ မင်းကို မွေးပြီးပြီချင်း ဆေးရုံမှာထားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဖေဖေနောက်ကို လိုက်သွားတဲ့ မင်းရဲ့ မေမေကို မုန်းလွန်းလို့ သေပြီလို့ လိမ်ပြောထားခဲ့တာ။ ကိုယ်လဲ ဒီအကြောင်းတွေကို မေမေဆုံးသွားပြီးနောက်မှ သိရတာ။ ကိုယ့်မေမေ ဆုံးပြီး လာခေါ်တဲ့ အချိန်မှာ မင်းတို့အိမ်ကို ဒေါ်ခင်မေလှိုင်း သွားခဲ့သေးတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ မင်းနဲ့ တွေ့ချင်လို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မင်းကတော့ မရှိဘူးလေ။”
“အင်း ဟုတ်တယ် စာမေးပွဲပြီးတော့ ချောင်းသာကို ခရီးထွက်ခဲ့တယ်လေ။ဖေဖေ့ရဲ့ ညီမတွေနဲ့။ ဖေဖေပဲ အိမ်မှာကျန်ခဲ့တာ အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ ဆိုပြီးတော့”
“အဲဒီတော့မှ မင်းကို ဒေါ်ခင်မေလှိုင်းရဲ့ သမီးမှန်း ကိုယ်သိခဲ့တာ။ဒါကြောင့် မင်းကိုမေ့ပစ်ဖို့ မင်းနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်မေမေ တစ်ယောက်လုံး ဆုံးရှုံးရတာ မင်းရဲ့ အမေ ဒေါ်ခင်မေလှိုင်းဆိုတဲ့ မိန်းမကြောင့်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးကို ခြယ်လှယ်ခဲ့တဲ့ မိန်းမ။ “
“ဒါဆို ကျွန်မ တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်း အိမ်ကိုလာလည်တဲ့ မိန်းမကြီးက.”
“ဟုတ်တယ် အဲဒါ မင်းရဲ့ အမေပဲ။ ”
“ကျွန်မတောင် စိတ်ဆိုးသွားသေးတယ်။ ကျွန်မနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှင့်အကြောင်းပြောနေတာကို အသံမပေးပဲ ရပ်ပြီး နားထောင်နေလို့လေ. ဖေဖေ့ရဲ့ ဧည့်သည်က သူများကိုယ်ရေး ကိုယ်တာကို သိပ်ပြီး စပ်စုတာပဲလို့ ”
“အင်း ဒါကြောင့်ထင်တယ် ကိုယ်နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ပြီး ပြန်လာတော့ မင်းနဲ့ကိုယ့်ကို လက်ထပ်ပေးဖို့ သူကြိုးစားခဲ့တယ်”
“ဟင်. ကျွန်မပြောတာ ရှင့်ရဲ့ထီးကလေးကို အမှတ်တရ သိမ်းထားတယ် ဆိုရုံလောက်ပါ။”
“အဟင်း အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် မင်းနဲ့ဝေးနေပေမယ့် တစ်ရက်မှ မင်းကိုမေ့လို့မရခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်ခင်မေလှိုင်းရဲ့ အစီအမံကိုလည်း ကိုယ်မလိုက်နာချင်ဘူး။ သူ့ကြောင့် သူ့ရဲ့သမီးထိခိုက်နစ်နာသွားရပါလား ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်စေချင်တာ။ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့ နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတူတူ တက်ခဲ့တဲ့ နန်းမြင့်ခိုင် နဲ့ လူသိရှင်ကြား ကိုယ်စေ့စပ်ခဲ့တယ်။”
“ဟင်. ရှင်စေ့စပ်တာနဲ့ ကျွန်မနဲ့က ဘာဆိုင်လို့လဲ ..”
“ဒါဆို ကိုယ့်မှာစေ့စပ်ထားတဲ့သူရှိတယ်လို့ သိသွားတာနဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ့်ဘေးနားကနေ ပြေးထွက်သွားရတာလဲ .”
“လှိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာလို့ညာနေတာလဲ။ ခုလိုမျိုး ကိုယ်ခံစားနေရတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ညာခဲ့လို့ လှိုင်းရဲ့ သိလား။ တစ်ကယ်လည်း ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ အတိုင်း ဒေါ်ခင်မေလှိုင်းခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အိပ်ရာထဲ လဲခဲ့တဲ့ထိ ဆိုပါတော့။အဲဒီနောက် ကိုယ့် ဖေဖေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် ဦးစီးခွင့်တွေ ရလာခဲ့တယ်။ ပြသနာက ကိုယ်နဲ့ လှိုင်း ပြန်ဆုံခဲ့တာပဲ ”
“ဒါကြောင့် ရှင်ကျွန်မနဲ့ ခပ်တန်းတန်းနေခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ ”
“အင်း. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အချစ်တွေကိုတော့ ဟန်ဆောင်ထားခဲ့လို့ မရဘူး။ တစ်ဖက်ကလည်း မင်းဟာ ဒေါ်ခင်မေလှိုင်းရဲ့ သမီးဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို မေ့လို့မရပြန်ဘူး။ ”
“ကိုယ် မင်းကိုအရမ်းချစ်မိသွားတယ် လှိုင်း။ ”
“ခု ကျွန်မရဲ့ မေမေရော..”
“ကိုယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သူလွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လလောက်ကပဲ ဆုံးသွားပြီ။”
“ရှင် အရမ်းရက်စက်တာပဲ ဒီရေ။ ဘာဖြစ်လို့ တည်ငြိမ်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဘ၀ကို ပြန်ပြီး လှုပ်နိုးချင်ရတာလဲ။ ကျွန်မရဲ့ မေမေ ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာမလိုရှိသေး ခုတော့ ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ ဘာ့အတွက်ကြောင့် ဒါတွေ ကျွန်မကို လာပြောပြနေရတာလဲ . ကျွန်မခံစားနေရတာကို ရှင်မြင်ချင်သေးလို့လား”
“ကိုယ်တောင်းပန်ပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားထက် လေးနက်တဲ့ စကားလုံးတွေ ရှိသေးရင် ကိုယ်သုံးမိမှာပါ။ ခုကိုယ်နောင်တရနေ လှိုင်း။ ခုကိုယ့်ဘ၀ကြီးက အဓိပ္ပါယ်မဲ့နေတယ်။ ကိုယ့်အတွက် မင်းလိုအပ်တယ်။ ကိုယ်မင်းကိုလိုက်ရှာခဲ့သေးတယ်။မီ့ ကိုလည်း ဘယ်လိုမှ မေးလို့မရခဲ့ဘူး”
“ဟုတ်တယ် မီ ကလည်း ရှင့်ကို မုန်းနေတာ။ ရှင့်မှာ စေ့စပ်ထားတဲ့ သူရှိရဲ့ သားနဲ့”
“နောက်ဆုံး မင်းဖေဖေဆီကို ကိုယ်သွားခဲ့တယ်။ ကိုယ့်အမှားတွေကိုလည်း ကိုယ်ဝန်ခံခဲ့တယ်။ မင်းဖေဖေ ပေးလိုက်တဲ့ လိပ်စာနဲ့ ကိုယ်ဒီကို လိုက်လာခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် မင်းကိုယ်နဲ့ ထွက်ပြီး မတွေ့ခဲ့ဘူး။ မင်း ကိုယ့်ကိုယ် ရှောင်နေတယ်။ ”
“ဒါဆို ဖေဖေ ..သိပြီးသားပေါ့။”
“အင်း ဟုတ်တယ် ထီးကလေးရဲ့ ပိုင်ရှင်ကို ခုမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ်တဲ့ ”
ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားကို ညာမနေတော့ပါဘူး။ ကမ်းလင့်လာတဲ့ ဒီရေ ရဲ့ ပုခုံးကို အလိုက်သင့် မှေးတင်လိုက်ရင်း အထီးကျန်မှုနဲ့ ဘ၀အမောတွေကို ဖြေသိမ့်လိုက်တော့တယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှသာ ဧည့်ဝတ်ကျေနိုင်တော့တဲ့ ဆွေလေးရဲ့ ဘလော့ လေးကို မကြာခဏလာလည်ပေးကြတဲ့ ဘလော့မောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ ပြောရင်း
ဘလော့ မောင်နှမများ အားလုံး ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။